Fampianaran’ny Ampinga: hiaraka ny kabary sy ny fanentanana lanonana | NewsMada
Fampianaran’ny Ampinga: hiaraka ny kabary sy ny fanentanana lanonana
Par Taratra sur 23/01/2019
Hanomboka amin’ny alahady izao ny fianarana kabary eo anivon’ny fikambanana Ampinga ka toerana efatra no ahitana izany : LTP Alarobia, ANS Ampefiloha, sekoly St Jean eny Ambohimangakely ary eny amin’ny sekoly Fanoellie eny Imerinafovoany. Maharitra valo volana ny fiofanana, maimaimpoana, toy ny mahazatra.
Araka ny nambaran’ny filohan’ny Ampinga, i Manampisoatoavina Lalaina, tsy hijanona fotsiny amin’ireo fandaharam-pianarana mahazatra ny fahalalana homena ny mpiofana, manomboka amin’ity andiany ity. Hampianarina azy ireo koa ny fomba fanolorana sy fanentanana lanonana. « Natao izany noho ny fangatahan’ny mpianatra », hoy hatrany ity tompon’andraikitra ity.
Noho ny filàn’ny mpianatra kabary hatrany, hitarina amin’ireo foibe fianarana efatra ireo ny fandalinana kabary, raha toa ka ny teny amin’ny LTP Alarobia ihany no nisy izany, teo aloha. Efa vonona sy ampy ihany koa ny isan’ny mpampianatra hiantsoroka izany. Nomarihin’ny filohan’ny Ampinga fa efa nahavita fiofanana manokana avy amin’ny minisiteran’ny Kolontsaina, ny federasion’ny mpikabary ary ny fikambanana ireo mpampiofana eo amin’ny lafiny fandalinana kabary ireo. Samy efa nahazo mari-boninahitra ihany koa izy ireo noho ny traikefa ananany, araka ny nambaran’i Manampisoatoavina Lalaina hatrany.
Tsiahivina fa taona maro no efa nandraisan’ny fikambanana Ampinga anjara amin’ny fampiroboroboana ny tontolon’ny kabary. Mampiavaka ny fampianarana entin’izy ireo ny fampahafantarana na fampahatsiahivana ireo mpiofana ny soatoavina malagasy.